WAXYAABAHA LAGA SOO SAARO GERANIUM: WAXA AY TAHAY, LAGA MAMNUUCAY RUUSHKA AMA MAAHA, LAGA BILAABO WAXA SALIIDDA KA CAAWIYA, MA IIBSAN KARTAA FARMASHIYAHA, IYO SIDOO KALE DALBASHADA MIISAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Wax soo saarka geranium yaab leh - waa maxay, waa maxay faa'iido, laga mamnuucay Russia ama ma?
Soo saaridda Geranium waxaa sidoo kale loo yaqaan 'DMAA' (1,3-dimethylamine) ama geranamine. Waa niyadjab nafsaani ah iyo gubane guban, taas oo 4-10 jeer ka xoog badan kafeyn.
Awoodda saameynteeda waxay ku xirantahay hadba xaaladda gobolka ee qof kasta.
Muuqaalkan noocan ah waxaa laga helaa by distilling caleemaha iyo jirridda of geranium. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa halka qalab noocan ah loo isticmaalo iyo waxa ay ka caawiso.
Ma Geranamine ayaa ku mamnuucday Ruushka ama ma?
Markii hore, waxa loo adeegsan jiray qalab degdeg ah si loo yareeyo xitaa inta badan cirridka sanka. Laakiin si dhakhso ah, saameynta nafsiga ee awoodda nafsiga ah ayaa noqotay mid la dareemo. Noocyada sanka ah ee Geranium ayaa si degdeg ah looga saarey wax soo saarka waxayna bilaabeen in loo isticmaalo sida kiciyaasha ciyaaraha.
Markii ugu horeysay ayaa ka hadlay khatarta uu ku leeyahay Maraykanka. Ka dib 2011 waxaa lagu mamnuucay UK, Canada, Australia iyo New Zealand. Sanadkii 2014, Hay'adda La-Dagaalanka Ruushka ee Ruushka ayaa mamnuucday soo saarida geraniummaadaama saameynteeda ay aad ugu egtahay saameynta doping.
Waxyaabaha lagu daro (cunto dheellitir ah), oo laga soo saaro saliidda saliida ee saliida ah waa mid ka mid ah qaybaha, ayaa loo oggol yahay iibka, laakiin waxay isticmaali karaan oo kaliya xirfadlayaal aan xirfad lahayn.
Ka fikir waxa ay tahay. Soo saarida Geranium waa 100% 1,3-dimethylamine. Tani waa habdhismo dabiici ah oo leh foomka CH3CH2CH (CH3) CH2CH (CH3) NH2. Waxay tilmaamaysaa aminada fudud ee aliphatic. Dhismuhu wuxuu la mid yahay eefedrine iyo adrenaline.
Guryaha ka soo jeeda geranium:
Si dhakhso ah u saar nabarka.
Waxay isku dhejisaa maraakiibta.
Si tartiib ah u kordho xoojinta.
Wuxuu keenaa tamar xoogan oo xoog leh.
Waxay hagaajisaa waxqabadka maskaxda iyo xasuusta.
Waa kiciye xoog leh oo nidaamka dareenka ah.
Waxay hagaajisaa dhiigga maskaxda.
Waxay yareeysaa rabitaanka cuntada.
Dhiirrigelinta kobcinta degdegga ah ee murqaha, oo la siiyaa tababar joogto ah.
Waa awood guban leh.
Dhammaan sifooyinka kuwan ka soo jeeda geranium waxaa sabab u ah xaqiiqda ah waxay kicisaa wax soo saarka norepinephrine ee jirka. Waa mid ka mid ah hormoonada adrenal. Waxa kale oo ay keenaysaa in si degdeg ah loo sii daayo dopamin. Labada hormoon ee hormoonada ah waa kuwa kiciyeyaasha xooggan ee habka dhexe ee dareenka.
Ugu horreyntii, DMAA waxaa lagu nuugay marinka mindhicirka, ka dibna waxay gasho dhiigga waxayna bilowdaa in uu dhaqmo.
Waxyaabaha ka soo baxa Geranium wuxuu u dhaqmaa sidii dib-u-qaboojiye-celiye loogu talagalay hormoonkaas. Jirka bani'aadamka, haddii hormoonada qaarkood ay sameeyeen wax aad u badan, si dhakhso ah ayuu u baabi'iyaa dhererka ama u kala qaybiyaa waxyaabo waxtar leh. DMAA ma oggola in jirka uu jebiyo norepinephrine xad-dhaaf ah.
Taas awgeed, wadnaha garaaca iyo cadaadiska ayaa si dhakhso ah u kordha, saameynta sambabada ayaa sidoo kale dhaca. Oogeenta kudhaca xinjirin-ku-oogista waxay noqotaa mid aad u badan.
Iyadoo qiyaasta xad dhaafka ah, gaajada oksijiin ee maskaxda ayaa marka hore dhacda.. Taasi waa, waxaa jira xad-dhaaf ah ogsijiinka jirka, laakiin ma geli karo unugyada tiro ku filan. Tani waxay imaan kartaa dawlad la mid ah hurdada. Waxay u muuqataa kadib dhowr saacadood waxayna socon kartaa 5-7 saacadood. Isla mar ahaanteed, halkii uu ka soo kordhi lahaa xoogaa ka soo horjeeda taakulada dabeecadda, qulqul xoog leh ayaa la dareemay. Ka dib markii la joojiyo ka soo bixinta geranium, dareenka sida hareeraha u muuqdaan.
Digniin! Soo saarida Geranium lama wadaagi karo khamriga. Tani waxay keeni kartaa istaroogga ama wadnaha wadnaha.
Halkee laga isticmaalaa oo ka caawiyaa?
Tani waa dhiirigelin dabiici ah oo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa maskaxda ah.Sidaa darteed, waxaa badanaa aqbalaa ardayda inta lagu jiro fadhiga. Wuxuu awood u leeyahay in uu si xoog leh u kordho feejignaanta, taas oo si gaar ah muhiim u ah inta lagu jiro imtixaanka.
Waxaa loo adeegsadaa tamar leh burburhaddii xaalad nololeed aysan u ogolaanin in ay nasato oo nasato. Iyada oo adkaanshaha adag ee qiyaasta lagu tilmaamay khariidada, saameyntu waa mid dhakhso badan oo marar badanna way ka xoog badan tahay kan caffeine.
Sida sheyga "geranium energy" waa la qaadan karaa, sida koorso hal mar ah. Laakiin ma isticmaali kartid si joogto ah, waa tallaabo deg-deg ah oo lagu kicinayo jirka, ka dibna waxay u baahan tahay nasasho.
Tani waa hab weyn oo lumiso miisaanka., sababtoo ah DMAA waa dab-dhaliye awood leh. Ujeedadaas awgeed, waxaa la isku daraa kafatein, ka dibna saameyntu waxa ay marmarsiiyo badan tahay. Dheef-shiid kiimikaadka ayaa la kiciyaa 35%. Nidaamka gubashada dufanka ee jidhka ayaa la dedejiyey by 170%.
Dheeraadka ayaa ka hortagaya cudurrada kalyaha, maaddaama culeyskaasi uu noqon doono mid halis ah, waxay u baahan doonaan inay soo saaraan xaddi badan oo dufan kala gooni ah jirka. Xataa iyada oo kelyo caafimaad leh waxaad u baahan tahay inaad la socoto xaalada. Haddii raaxo la'aan iyo xanuunku ku dhaco, isla markiiba joojinta qaadashada dawada.
Digniin! Miisaankaaga ma dhumin kartid adigoo qaadanaya soo saar walan ah oo fadhiya sariirta.
Waxay ku shaqaysaa oo kaliya isku-dhafanaanta cunto isku dheelitiran oo dheellitiran (ma jiraan wax gaajo ah iyo xaddidaadda cuntada xad-dhaafka ah waa in aysan aheyn) iyo jimicsiga jireed ee joogtada ah. Xaaladdan oo kale, saameyntu waxay noqon doontaa mid deg deg ah, joogto ah oo cajiib ah.
Soo saarida Geranium waxaa lagu isticmaalaa ciyaaraha aan xirfad laheyn si macquul ah uga caawiso in si degdeg ah loo dhiso murqo. Sidoo kale waa firfircooni firfircoon oo kicin leh ka hor inta aan la qaban. Waxay isku dhejisaa marinnada dhiigga, waxoogaa kor u qaadaan cadaadiska, sababa xoog korodhsi, taas oo kuu ogolaaneysa inaad siiso wax walba ugu badnaan. U qaado baahida DMAA 1-1,5 saacadood ka hor tababarka.
Xusuusnow, haddii aad ciyaaraha ku ciyaareyso xirfad ahaan, waa suurtagal in la qaato wax soo saar leh, xitaa inta lagu jiro diyaarinta tartan, waxaa loo tixgeliyaa sida doping.
Wax kasta ha noqoto ujeedada qaadashada DMAA, waxaad u baahan tahay inaad si adag u raacdo talooyinka soo saaraha iyo si adag ula soco qiyaasta iyo habka maamulka. Iska-dhigi tan iyo qaadashada kaabiga geranium in ka badan 1-2 jeer maalintii ayaa yeelan kara saameynta soo horjeeda. Halkii laga heli lahaa tamar, giigsanaanta, gariir, madax-xanuun, lallabo bilaabi doonto. Aardiyanka noocan oo kale ah wuxuu bilaabi karaa, boodo cadaadis ah. Xaddiga xad dhaafka ah wuxuu keeni karaa istaroog.
Xaggee iyo intee ayaa la iibsan karaa?
DMAA waxay ubaahantahay in ay eegto dukaamada nafaqada ee gaarka ah. Farmashiyeyaasha, waxaa dhif ah iibin, laakiin wali way dhacdaa. Haddii aanay jirin dukaamo noocaan ah magaaladaada, habka ugu sahlan waa inaad dalbato dukaanka internetka.
Kala soocidda Geranium waa daroogada ajnabiga ah, sidaas darteed ma noqon karto raqiis. Iyada oo ku xiran baqshadda, wax soo saarka iyo qiimaha dukaamadu waxay u dhaxeysaa 1,500 ilaa 2,500 roon. Mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa kaydka oo aad ka iibsan kartaa DMAA 1000 rr. Haddii sicirka uu hooseeyo, waa in lagu soo wargeliyaa, iyada oo suurtogalnimada weyn uu yahay been abuur.